Al-Shabaab oo loogu hanjabay in nolosha lagu gubayo | Curubo.com	Thursday, July 20th, 2017	Home
Al-Shabaab oo loogu hanjabay in nolosha lagu gubayo
Jan 2, 2015 - Comments off	Ururka Al-Shabaab ayaa waxay wadada ugalaan gaadiidka Mucaawimada uwada deegaanada ay hore umaamuli jireen Gobollada dalka Soomaaliya.
Dhowr jeer ayaa waxa lagu weeraray gaadiid Deeq mucaawimo ah siday Gobollada Hiiraan iyo Bay iyo Bakool kadib markii Al Shabaab ay wadada ugaleen baabuurtaasi oo ay galbinayeen ciidanka Dawlada Somaliya.
Meelaha ugu badan ee dhibaatada ka jirto ee Baabuurta mucaawimada sida mari weysay waxa ka mid ah Jalalaqsi ilaa Buula burde oo bilo ay ku xayiran yihiin gaadiid dawlada udirtay Buulo burde.
Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed qeybta 12-ka April Janeral Maxamuud Maxamed Qaafoow ayaa sheegay in Al Shabaabkii ay nolosha ku qabtaan ay dab qabad siin doonaan isagoo nool islamarkaana ay ugu baaqayaan inay Tuulooyinka ay ku dhuumaaleysanayaan ay kasoo baxaan waa sida uu hadalka udhigaye.
Janeraal Qaafoow oo kusugan Gobolka Hiiraan ayaa waxa uu sheegay inay weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaq ah ay sameeyaan Shabaabka ayna ka cabsanayaan inay hortooda yimaadaan laakiin ugu hanjabay in Dab qabad siinayaan shabaabkii ay gacanta ku dhigaan.